Tag: fampiasana internet | Martech Zone
Tag: fampiasana internet
Talata, Jolay 30, 2019 Talata, Jolay 30, 2019 Nikola Djordjevic
Ny stereotype tsy azon'ny zokiolona ampiasaina, tsy azony, na tsy te handany fotoana amin'ny Internet dia miparitaka be eo amin'ny fiarahamonintsika. Na izany aza, mifototra amin'ny zava-misy ve izany? Marina fa manjaka amin'ny fampiasana Internet ny Millennial, saingy misy vitsy an'izany Baby Boomers amin'ny tranonkala manerantany? Tsy dia mieritreritra an'izany izahay ary efa hanaporofo izany. Ny zokiolona dia manaiky sy mampiasa teknolojia maoderina amin'ny fitomboan'ny isan'ny ankehitriny. Tsapan'izy ireo izany
Tsy manararaotra ny tsena manerantany ianao
Alarobia, Jolay 22, 2015 Talata, Jolay 21, 2015 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay, nitsidika mpivarotra ambongadiny iray aho. Manana orinasa sy toerana mampino izy izay ahafahany mamolavola, manamboatra sy mivarotra ny varotra rehetra avy amin'ny toerana misy azy avy hatrany am-boalohany. Ny fampitaovana ao aminy dia ny sasany amin'ireo tsara indrindra eto amin'ny firenena, ary ny olona rehetra ao amin'ny mpiasa dia manan-talenta miavaka ary manana mari-pahaizana. Ny fanamby napetrany dia ny tsy fahasarotan'ny fivarotana nentim-paharazana ny fifamoivoizana an-tongotra taloha. Brochure ny ankamaroan'ny fanatrehany an-tserasera. Handeha isika